Fampandehanana sinoa tsara indrindra tamin'ny septambra 2021 | Androidsis
Fandaharam-pahefana sinoa tsara indrindra
Jose Alfocea | | Android Android, SmartWatch
Mieritreritra ianao havaozy ny famantaranandronao taloha ho an'ny iray manana fiasa tsara kokoa sy famolavolana maoderina sy manintona kokoa, saingy tsy te ho voatazona am-paosy ianao? Manintona anao ve ny hevitra hoe manana smartwatch nefa mbola tsy tena resy lahatra ianao fa hahazo ny tsara indrindra amin'izany ary noho izany tsy te hampiasa vola be ianao amin'ny traikefa? Raha sendra misy amin'ireo toe-javatra roa ireo ianao, dia tonga amin'ny toerana mety indrindra.
Androany ao amin'ny Androidsis dia mitondra tolo-kevitra ho anao izahay miaraka amin'ny sasany ny smartwatches sinoa tsara indrindra. Eny, fantatro fa ny ankamaroan'ny famantaranandro marani-tsaina, telefaona finday ary fitaovana teknolojia hafa dia fanamboarana sinoa (na tatsinanana amin'ny ankapobeny), na izany aza eto dia miresaka momba ny smartwatches sinoa vita any chine isika ary amidy amin'ny marika avy any shina. Ary koa, araka ny azonao an-tsaina, momba izany smartwatch somary mora vidy kokoa noho ny mahazatra, na dia efa nolazaiko taminao aza fa tsy hotarihin'ny vidiny loatra isika. Te hahafantatra izay modely resahinay ve ianao? Mamakia hatrany.
1 Fandaharam-potoana sinoa amin'ny teti-bola rehetra
1.1 No.1 D5 +
1.2 NeeCoo V3
1.4 IWO 3
1.6 Lemfo Lem5
1.7 Kingwear KW88
1.8 Rwatch R11
1.9 Rubility KW18
Fandaharam-potoana sinoa amin'ny teti-bola rehetra
Smartwatch, 1.69 "Watch ...
Tsy misy hevitra
Jereo tolotra Jereo ny fiasa
ANDUBEST Smartwatch, ...
Amazfit Bip S Lite ...
Padgene SmartWatch ...
Huawei Watch GT 2e Sport ...
Ao amin'ny Androidsis dia manohy tapa-kevitra ny hampiseho aminao ny vokatra tsara indrindra eny an-tsena izahay, ary ambonin'izany rehetra izany, izay manana sandam-bola tsaratsara kokoa na, toy ny amin'ity tranga ity, ny smartwatches sinoa izay mora vidy kokoa. Mazava ho azy fa tolo-kevitra ihany ireo satria, araka ny azonao an-tsaina, tsy fantatsika tanteraka ireo maodely rehetra misy eny an-tsena. Ho fanampin'izay, isam-bolana dia maodely vaovao no atomboka, fanavaozana ireo famantaranandro efa misy eny an-tsena, ary na dia marika vaovao aza izay, na dia tsy manokana zato isan-jato amin'ny fotoanantsika aza dia azontsika atao ny mandinika, manandrana ary manombatombana. Noho izany, anio dia manolotra anao safidy ny smartwatches sinoa tsara indrindra Miorina amin'ny mason-tsivana toa ny endrik'izy ireo, ny fitaovana nanamboarana azy ireo, ny fanoherany sy ny fizakan-tenany, ny fakan-tsarimihetsika ary, amin'ny lafiny farany, ny lafiny teknika izay tena kendrena hamaritana raha misy efamira smartwatch mety mifanaraka amin'ny filainay, eto koa asehonay anao ny fomba dsmartwatch sinoa onfigure ka tsy manana olana ianao raha vantany vao voaray. Noho izany, tsy mila adim-potoana intsony, andao hanomboka.
No.1 D5 +
Toa tsy dia be loatra aminao izany, na izany aza No.1 D5 + es iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny resaka sandan'ny vola izay hitanao eo amin'ny tsena ankehitriny ary, indrindra indrindra, omen'ny olona mampiasa azy io.
Ny No.1 D5 + dia manana endrika kanto nefa tsy ara-potoana, vatana vy ary miaraka amin'ny efijery IPS 1,3-inch sy ny vahaolana 360 x 360. Ao anatiny no misy mpampandeha Mediatek MTK6580 miaraka amin'ny memo RAM 1 GB sy Fitahirizana 8 GB anatiny. Milanja 78 grama fotsiny, ampy ampidirina a Bateria 450 mAh Azonao atao ny maharitra mandritra ny tontolo andro, na dia, mazava ho azy, izany dia hiankina tanteraka amin'ny fampiasana lehibe kokoa na kely kokoa omena ny famantaranandronao. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy miavaka indrindra dia ny fampidirana ny slot SIM-card, izany hoe, manome Fifandraisana 3G amin'izay ianao afaka mampiasa azy na dia mijanona ao an-trano aza ny smartphone-nao. GPS, sensor amin'ny tahan'ny fo dia sasany amin'ireo singa mameno an'ity smartwatch ity, ankoatr'izay, dia vovoka sy rano mahatohitra.
Mety misy ny sasany aminareo mieritreritra fa niady totohondry tamin'ny No.1 D5 + aho fa tena izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko sinoa tsara indrindra, na dia tsy tena mora indrindra aza izany. Mba hanonerana, dia hanao ny làlana mankany amin'ny safidy mora vidy kokoa isika fa manana kalitao tsara, ny NeeCoo V3, famantaranandro marani-tsaina miaraka amin'ny famolavolana tena kanto mifanentana amin'ireo fitaovana Android sy iPhone, vita amin'ny vy (magnesium sy aliminioma alimika) miaraka amina fehikibo hoditra ary efijery IPS 1,3 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 240 x 240, Bluetooth 4.0, Bateria 380 mAh. 64 grama fotsiny ny lanjany ary na dia tsy tantera-drano aza dia manana vidiny mirary latsaky ny fitopolo euro. Amin'izany dia azonao atao ny manara-maso ny hetsika ara-batana rehetra, mahazo fampandrenesana ary maro hafa.
Safidy mahafinaritra hafa, indrindra ho an'ireo izay misalasala bebe kokoa amin'ny fananana na tsy fananana famantaranandro marani-tsaina ary manana teti-bola tery kokoa koa, MallTEK inona no azonao 25 euro fotsiny. Ny fitovizany amin'ny Apple Watch dia miharihary ary na dia tsy mahatratra ny kalitao sy ny fahombiazany aza izy dia manana endrika mahaliana toy ny fifandraisana finday. Eny, ity MallTEK ity dia azo ampiasaina amin'ny karatra SIM, avelany eo ankilany ny finday avo lenta, saingy manome efijery 1,54-inch manana vahaolana 240 x 240 ihany koa izy. Bateria 380 mAh, fakantsary ary milanja 62 grama fotsiny. Te hiditra amin'ny tontolon'ny smartwatch ve ianao? Ity dia safidy tsara izay anananao amin'ny famaranana telo, volafotsy, mainty ary mavokely.
Fa raha mahaliana anao ny famolavolana ny famantaranandron'ny paoma ary tsy vonona ny handany izay angatahin'ny olona Cupertino ianao, ity IWO 3 eny izy io dia tena klone an'ny Apple Watch, ao anatin'izany ny Digital Crown eo an-daniny. Izy io dia mifanaraka amin'ny finday iOS sy Android ary misy ny efijery IPS 1,54-inch ary ny vahaolana 240 x 240. Ao anatiny dia misy processeur MediaTek MTK2502C miaraka amin'ny RAM 138 MB, fitehirizana 64 MB ary bateria. 350 mAh. Miharihary fa ambany noho ny fitaovana sy rindrambaiko amin'ny Apple Watch izy io, saingy mitombina ihany raha jerena ny vidiny. Izahay dia manizingizina fa ity dia smartwatch sinoa indrindra mety ho an'ireo izay mitady famolavolana bebe kokoa noho ny fampiasa na dia azonao atao aza ny manara-maso ny hetsika ara-batana ataonao ary mahazo fampandrenesana.
Ny feno kokoa dia ity clone hafa amin'ny paoma paoma ity izay misy aza fifandraisana sy fakan-tsary sy finday amin'izay ianao afaka manohy mampiasa azy na dia tsy manana finday finday eo akaiky eo aza ianao. Momba ilay zavatra kely tsy fantatra Tsy misy vokatra. izay, miaraka amin'ny vidiny fito-polo euro monja, dia manome, ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, ny efijery 1,54D IPS 2.5-inch ary vahaolana 240 x 240, Bateria 320 mAh, Bluetooth 4.0, mpanodina Mediatek MTK2502 ary mifanaraka amin'ny telefaona finday iPhone sy Android.
Hivadika hiresaka momba ny fandaharana marani-tsaina sinoa roa isika izay mety tsy ho mora vidy toy ny teo aloha, nefa azo antoka fa izany dia ohatra roa mazava amin'ny fantsom-pahitalavitra sinoa tsara indrindra ary, raha ny marina, efa niresaka momba azy ireo isika indraindray.
Manomboka amin'ity isika LEMFO LEM5, famantaranandron'i endrika matanjaka sy famolavolana boribory miaraka amin'ny bokotra telo izay mampahatsiahy antsika be dia be ireo fiambenana ireo amin'ny androm-piainany. Manolotra efijery IPS 1,39-inch sy vahaolana 400 x 400 izy io raha ao am-pony kosa dia mitazona processeur Mediatek MTK6580 miaraka aminy RAM 1 GB sy fitehirizana 8 GB anatiny ka afaka mitondra mozika be dia be miaraka aminao foana ianao. 89 grama fotsiny ny lanjany, ampy hatolotra a Bateria 450 mAh y Fifandraisana 3G hahafahanao mampiasa azy ivelan'ny finday avo lenta. Anisan'izany ny GPS, sensor amin'ny tahan'ny fo, sns. Mazava ho azy fa famantaranandro ny kalitao sy ny fahombiazany izay avo lavitra noho ny teo aloha, betsaka kokoa amin'ny tsipika nomban'ny No.1 D5 + izay nanombohanay ity fifantenana ity ary noho izany dia avo kokoa ihany koa ny vidiny.
Amin'ny tsipika mitovy amin'ny kalitao teo aloha no ahitantsika an'io Tsy misy vokatra. Saingy, ity maodely ity dia somary ambany noho ny Lemfo Lem5 satria izy manana ny antsasaky ny RAM sy ny fitehirizana anatiny, 512 MB sy 4 GB tsirairay avy. Manolotra fizakantena somary ambany ihany koa izy io, Bateria 400 mAh fa manohana azy dia manana a Fakan-tsary 2 MP ary lanja 65 grama fotsiny izay somary maivana kokoa. Ny processeur dia mitovy, ny Mediatek MTK6580 ary misy ihany koa fifandraisana finday.
Raha ankoatry ny fampiasana dia mitady hatsarana ianao, ity Rwatch R11 Azonao atao ny manao azy amin'ny fampakaram-bady sy fivoriana nefa tsy manome fipoahana. Araka ny hitanao dia manolotra endrika tena mitandrina izy, miaraka amin'i endrika sy kofehy somary kilasika sy kanto. Izy io dia miteraka fitoviana amin'ny Moto 360 ary misy fiasa vitsivitsy izay ho ampy amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ao anatiny no misy mpanamory Mediatek MTK2501, 128 MB RAM, 64 MB ROM miaraka amin'ny fanohanana microSD hatramin'ny 32 GB, NFC, fifandraisana Bluetooth 3.0, batterie 450 mAh, sensor amin'ny tahan'ny fo ary mifanaraka amin'ny iPhone sy amin'ny Android. Mazava ho azy, mitandrema satria TSY mahatohitra rano izy io.
Azoko antoka fa tsy toa anao na inona na inona ity famataranandro ity, na eo aza izany dia manana endrika tiako izy (indrindra amin'ny mainty) ary vidiny sarobidy mihoatra ny dimampolo euro fotsiny. Momba an'io Rubility KW18, smartwatch sinoa boribory izay milanja 68 grama fotsiny, famaranana telo, efijery 1,3-inch, processeur Mediatek MTK2502 miaraka amin'ny RAM 64 MB, Bluetooth 4.0, bateria 340 mAh, sensor amin'ny tahan'ny fo, mifanaraka amin'ny iOS sy amin'ny Android, tsy misy rano, fifandraisana finday, manohana karatra microSD.
Fahita matetika fa rehefa miresaka momba ny smartchches sinoa (na vokatra sinoa hafa isika) dia mirona saika hieritreritra ho azy ny vokatra mora sy ambany kalitao, kanefa, araka ny hitantsika dia finoana malaza kokoa io fa tsy zava-misy. Na dia marina aza fa mora kokoa ny rindrambaiko sinoa amin'ny ankapobeny, ny elanelan'ny vidiny sy ny kalitao dia malalaka ihany koa Ka ny lakileny dia ny fahafantarana ny antony hampiasantsika ny famantaranandrontsika marani-tsaina, raha tena hampiasa azy io isan'andro isika, raha mila azy io hiasa tsy miankina amin'ny finday avo lenta, sns.
Inona no smartwatch sinoa azonao ampiana amin'ny lisitra ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fandaharam-pahefana sinoa tsara indrindra
6 hevitra, avelao ny anao
Dean dia hoy izy:
Ampiako ny bip mahatalanjona sy ny hafainganana izay famantaranandro ara-panatanjahantena ary manana vidiny lafo amin'ny GPS
Valiny tamin'i Dean
IMN dia hoy izy:
Ary aiza ny Domino DM368 Plus? sa ny Finow X5 AIR? ...
Ity lahatsoratra ity dia tsy dia misy fikarohana kely.
Valiny amin'ny IMN
Ivo dia hoy izy:
Ny KW18 voatanisa dia tsy ny tany am-boalohany, fa ny KingWear k1w8
Mamaly an'i Ivo
Mercedes dia hoy izy:
Lemfo kW 10, tiako ny afaka manova azy ireo sa afaka ianao? Manontany aho?
Valiny tamin'i Mercedes
anjelin'ny lohasaha dia hoy izy:
Mitady SmartWatch aho, ankoatry ny APPLE…. miaraka amin'ny ECG -Electrocardiogram- (voamarina amin'ny klinika) Fantatro fa Xiaomi dia manana iray miaraka amin'ity fiasa ity mikatona toy ny Samsung ...
Misaotra tamin'ny pejy tsara nataonao.
Angel del Valle
Mamaly an'i angel del valle
Jose Antonio dia hoy izy:
Afaka manao SmartGatch 4G misy karatra SIM "manome Internet" ohatra amin'ny solosaina toy ny Mac mini amin'ny alàlan'ny Wi-Fi?.
Izany hoe, raha misy Smartwatch 4G misy karatra SIM dia azonao atao ny manao toy izany amin'ny telefaona.
Valiny tamin'i Jose Antonio
Jay Y. Lee, filoha lefitry ny Samsung, dia voasazy higadra 5 taona
Ny Google Pixel 2 dia efa manana daty famotsorana ary ho tonga miaraka amin'ny Snapdragon 836